Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Ubuntu 14.04 Trusty Tahr | Site na Linux
Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Ubuntu 14.04 Trusty Tahr
Ubuntu 14.04 ntụkwasị obi Tahr hụrụ ìhè ụbọchị ole na ole gara aga. Dị ka anyị na-eme na ntọhapụ ọ bụla nke ọgba aghara a, lee ụfọdụ ihe ị kwesịrị ime mgbe na-eme a ndozi site na mbido.
O yikarịrị ka mgbe ahapụchara Ubuntu 14.04, mmelite ọhụrụ nke nchịkọta dị iche iche na-abịa na onyoyo ISO nke ekesara site Canonical apụtala.
sudo apt wụnye gnome-shei
sudo tinye-apt-repository ppa: ricotz / testing sudo tinye-apt-repository ppa: gnome3-team / gnome3 sudo tinye-apt-repository ppa: gnome3-team / gnome3-staging sudo apt melite sudo apt wụnye gnome-shell gnome- tweak-tool gnome-shell-mgbakwunye
sudo tinye-apt-repository ppa: gwendal-lebihan-dev / cinnamon-stable sudo apt melite sudo apt wụnye cinnamon
sudo tinye-apt-repository "deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu $ (lsb_release -sc) isi" sudo add-apt-repository "deb http://repo.mate-desktop.org / ubuntu $ (lsb_release -sc) isi "sudo apt melite sudo apt wunye mate-archive-keyring sudo apt install mate-core mate-desktọọpụ-gburugburu
Gaa Ubuntu 14.04 ndu desktọọpụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Ubuntu 14.04 Trusty Tahr
Ihe 140 kwuru, hapụ nke gị
Ndewo, enwere m PC nwere Intel Pentium nke 3.00 Ghz na 2Gb nke Ram. Ubuntu 14.04 LTS ọ ga - eme nke ọma? Na Kubuntu ka obu Xubuntu?
Ọ dị mma. Ọ bụrụ na Pentium ị na-eji bụ sọrọ-isi, ị nweghị nsogbu na-agba Ubuntu na Kubuntu; ọ -bụru l'ọ bụ ọkpobe-okfu; Ọ kaara m mma ịkwado Xubuntu. Cheers!
Eche m. N'otu aka ahụ, ịnwere ike ịnwale ya site na pendrive ka ị hụ otu ọ si arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ chọpụta akụrụngwa gị niile nke ọma.
Ekwadoro m ka ị gụọ: https://blog.desdelinux.net/como-instalar-linux-desde-un-pendrive-usb/
Ma eleghị anya, ị ga-agagharị obere ngwa ngwa
Carlos Siera dijo
Eziokwu bụ ma ọ bụrụ na ọ na-agba mana ọ na-adị nwayọ nwayọ, ana m akwado na ọ bụrụ na ịchọrọ Ubuntu nke na-agba ọsọ nke ọma, ọ ga-aka mma LUBUNTU dị ngwa karịa igwe ochie karịa XUBUNTU.
Zaghachi Carlos Sierra
Esi m na Ubuntu 14.04 kwaga na Lubuntu 14.04 ma n'ezie arụmọrụ ahụ ka mma, 2gbs abụọ ahụ dị ka 4.
Zaghachi Carlos M
ee obere nwanne n’agba oso
Reference na-ezo aka Ubuntu 14.04 Saucy Salamander na paragraf nke mbụ. Daalụ maka ozi ahụ
Nke ahụ na-eme site na idetuo na ịdefe ……… post ahụ nwere ekele mana ọ bụ otu nnomi nke ọzọ
Nnọọ! Daalụ maka ozi ahụ. Agbaghara m paragraf mbụ, agbanweela m ya. 🙂
Ee ee, ọ dị nnọọ ka ntuziaka gara aga (ọ bụ ezie na ọ nwere mgbanwe) ebe ọ bụ na Ubuntu ka bụ otu, ka ọ bụ? Changinggbanwe asụsụ ọ dị iche na otu ụdị gaa na nke ọzọ?
Ọ bụghị nke ukwuu, mana ọ bụrụ na ọ dị mkpa itinye ihe ndị ọzọ gbasara ihe a na-ekwu maka ya, dị ka isiokwu nke menu ụwa niile nke dị ugbu a, na ụdị a nhọrọ nhọrọ eserese gosipụtara ịgbanwe ya. Otu ihe ahụ na-enwe ekele che!
The ppa ppa: makson96 / fglrx anaghị akwado Ubuntu 14.04
Kpọmkwem, enwere m nsogbu na ọ bụ na enwere m PC na hd3000 na 13.04 ma anaghị m emelite na 13.10 n'ihi nkwado nke ppa ahụ: / na amaghị m ihe m ga - eme, ikekwe ọ kacha mma ịlaghachi na 12.04, nri?
My Ati hd3450 na-arụ ọrụ zuru oke na ndị ọkwọ ụgbọala flgrx nyere m site Ọzọ ọkwọ ụgbọala na Mint 13 (Ubuntu 12.04). M ga-alaghachi ...
: O ekele maka n'ọnụ 🙂
Ọ bụ eziokwu. Ka m na-atụle n'okpuru, m na-emelite akụkụ ahụ nke onye ndu ahụ.
Daalụ maka data ahụ!
Ezi ụtụtụ, ugbu a ubuntu tweak ppa anaghị akwado ntụkwasị obi, na iwepu menu ụwa site na ọnụ ọgụgụ echeghị m na ọ bụ ezigbo echiche ebe ọ bụ na ugbu a enwere ike nkwarụ site na nhazi - ọdịdị - omume. Cheers
Ọ dị ugbu a na http://www.ubuntu-tweak.com mbipute 0.8.7 kwekorita na Ubuntu 14.04.
N'agbanyeghị nke ahụ, ntinye nke ngwugwu .deb na-enye ụfọdụ nsogbu ịdabere na nsogbu nke na-agba ọsọ na njedebe $ sudo apt-nwụnye -f –fix-efu.
Mgbe ịmechara nke a, usoro ihe omume ahụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ọ bụ eziokwu! Daalụ maka onyinye. Etuola m aka na ntuziaka. Maka ugbu a, usoro a tụrụ aro bụ iji ngwa ọkwọ ụgbọ ala ndị ọzọ, enwere ike ịnweta ya site na Dash.
Ndewo Alvaro! Nke ahụ abụghị eziokwu. Enweghi ike nkwanye menu ụwa niile site n'ebe ahụ. Enwere ike ịgbanwe ya naanị maka windo na-enweghị oke, dị ka akọwara na post.
Ọ bụ obere ihe dị iche, ma ọdịiche na njedebe.
Ndewo, a na m anwale Xubuntu 14.04 ọtụtụ ụbọchị ugbu a, ọ tụrụ m n’anya na enwetabeghi mmelite ọ bụla. Mee site na ọnụ sudo apt-nweta mmelite && sudo apt-nweta nweta nkwalite anaghị atụba ihe ọ bụla ọhụrụ. Emeela ya oge na-egosighi na enwere nchịkọta dị; n’enyeghi njehie. O yighị ka ọ dị m mma.
N'aka nke ọzọ, onye nbipute m anaghịzi edozi onwe ya mgbe m jikọtara ya. Ekwesịrị m iji aka m mee ya na, ọ bụ ezie na ọ wụnye n'ụzọ ziri ezi n'ụzọ a, ọ dị ka ịla azụ Xubuntu 12.04.
Onye ọzọ ọ na-eme?
nwa oge gara aga Emechara m wụnye ya ma ọ bụrụ na mmelite (ole na ole) bịara, mana ha ji iwu apt-get dist-upgrade nye iwu. M ga-etinyekwa uche, na-agbakwunye dị ka ihe kpatara na ọ nwere ike ịchọ nchịkọta na nyocha ọgụgụ isi ma wepu ìgwè niile na-ahapụghị ngwugwu rụrụ arụ, dịka ọ dị na motherboard Debian.
Ndewo Juan Carlos, olee otu esi etinye igwe obibi? M wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na mgbe m chọrọ ibipụta m nwetara ozi na-ekwu na m ga-ahazi nbipute. Na nsụgharị gara aga ọ gara n'enweghị nsogbu. Ahụghị m azịza ọ bụla na ọgbakọ ọ bụla.
Ndewo Ana: Kedu onye nbipute ị nwere?
Dị ka m kwuru, na Xubuntu 12.04 m Epson sx125 ngwa nbipute na-akpaghị aka ahazi mgbe ejikọrọ na nyocha (ọ bụ ọtụtụ) nwere ike hazie ya mgbe nbudata 2 .deb nchịkọta si Epson website
Na Xubuntu 14.04 onye nbipute agaghị ahazi mgbe etinyere ya (enwere olile anya na a ga-edozi ya na mmelite n'ọdịnihu) ma achọtala m ụzọ abụọ iji mee nke a:
1.- Gaa na NchNhr> Ntọala niile> Akụrụngwa> Ndị na-ebi akwụkwọ. Ọ dịghị onye na-egosi na m pịa Tinye ngwa nbipute. Si ebe a na-ama achọpụtara na ị dị nnọọ ime dị ka ọ dị na mbụ Ọzọ, Gaa n'ihu, wdg. rue ọgwụgwụ.
2.- Jiri Mgbanwe site na ihe nchọgharị na-abanye na adreesị http://localhost:631/ ma soro ntuziaka dị ka egosiri ebe a:
Ọ bụrụ na onye nbipute gị bụ HP ọ ga - ekwe omume (oge ụfọdụ ọ na - eme) na, dịka ị na - ekwu, o doro anya na a haziri ya nke ọma ma ọ naghị arụ ọrụ. Ihe ngwọta m bụ ịwụnye ngwugwu hplip-gui ($ sudo apt-nweta wụnye hplip-gui) wee gbaa ọsọ $ sudo hp-ntọala ma soro ntuziaka. Ọtụtụ oge ọ na-arụ ọrụ.
Aghọtara m na ị bụ onye Argentine, mana ị ga-amata ọdịiche dị n’etiti otu ị si ekwu okwu na otu i si ede ihe. Ihe dika sos = gi bu ihe ichoro = achoro, na ogologo ect.
Ha, ọ dọtakwara uche m na ọ dere dị ka nke a ... kpomkwem n'ihi na m kwuru, hey nke a bụ Argentine ... na abụ m Argentine ... Aghọtaghị m ihe kpatara na ọ ga-agbanwe ihe niile anyị chọrọ? N’ezie ọdịiche dị n’etiti otu ị si ekwu okwu na otu ị si ede ihe ... ma ọbụghị n’ụdị ihe ahụ ị na-aka akara, ma na usoro nke «edemede» ... Ana m agwa gị na anyị ndị Argentine na-edekwa “idioms” ndị ahụ (ma ọ bụ ihe ọ bụla a na-akpọ ha) . Mana chegodi na ndi Yankees kwesiri igbanwe akpaala okwu ha maka ndi nke Great Britain, ma obu ndi Peruvians, ma obu ndi Mexico ga abu otu ....
Ndewo atọ m!
Enwere m ekele maka okwu gị mana ọ tụrụ m n'anya na ịbụ onye Argentine ị hụrụ ya "ihe iju" ịhụ ọkwa edere dị ka nke a. Ọbụna na La Nación ma ọ bụ na akwụkwọ akụkọ ọ bụla na Argentina ha na-ede otu a.
N'aka nke ọzọ, enwere m ahụ iru ala ide ihe dịka Argentine, yana "mpaghara" m, dịka ọtụtụ blọọgụ ndị na-ede blọgụ Spanish si asọpụrụ "mpaghara" nke ha (iji gị dee, dịka ọmụmaatụ). M na-akpọ gị òkù ka ị degara ha akwụkwọ ka ha gbanwee ụzọ ha si ede ihe ma họrọ “Spanish”. Dịka ọmụmaatụ, ana m enye gị njikọ: http://www.muylinux.com/?s=ois
Che, o yiri m na ị ghọtaghị ihe ọ bụla ... ọ na-adọta uche m ịchọta onye Argentine ọzọ, ọ bụghị ka ị kwụsị ime ya n'ihi na echere m na site na Linux ọ si Cuba bịa .... mana n'ezie enwere m obi ụtọ na ị na-ede ede na mpaghara ahụ (nke m kwuru). Enwere m echiche na ebe ọ bụ na m mere "nkatọ" n'elu, ị chere na okwu m niile ga-abụ ihe na-adịghị mma. Kama nke ahụ ... (enwere ike m mejọrọ) mana ọ bụrụ na ọ bụghị, Aghọtaghị m otu ị ga-esi kọwaa okwu m n'ụdị a?
Ihe m kwuru na okwu na-esonụ banyere ịhọrọ Spanish na-anọpụ iche bụ naanị itinye onwe m n'ọnọdụ onye nke ọzọ, n'ihi na eg. Enwere m ụfọdụ obodo ndị Mexico ... ọ dịkwa mma ... mana m na-ekwughachi, ọ dị mma ịchọta ederede na Argentine na blog a nke ndị Cuban chere.
Blog a bụ mba ụwa. Anyị na-ede n'asụsụ niile nke Spanish.
Ka o sina dị, n'ụzọ, ana m arịọ mgbaghara ma ọ bụrụ na okwu m na-ewute gị, n'ihi na ọ bụghị ebum n'uche m, ma ọ bụ mado mpekere mbu, ọ bụ ihe m chere, mana a na-enwe ekele maka ọrụ niile.
unu abughi ndi obodo ma obu ndi kachasi ochie.
«Are na-» «chọrọ» ndị obodo, ma peninsular, M ga-eji «bụ», «chọrọ / chọrọ», nke na-anọpụ iche Spanish
ebe ọ bụ …… obodo… sep ndị na-anọpụ iche na Spanish bụ jụụ maka onye ọ bụla.
Na ide ihe site na iji “I bu” na “gi” na ihe niile abughi mpaghara? Biko..
M na-akpọ gị òkù ka ị gụọ ihe Royal Spanish Academy na-ekwu banyere ụzọ m si ede ihe. A na-akpọ ya «voseo» ma ejiri ya na Argentina na mba ndị ọzọ: http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=iOTUSehtID6mVONyGX
Ọbụghị ụzọ edemede a na-agụghị akwụkwọ ọ bụghịkwa "ụzọ esi ekwu okwu", ọ bụ naanị ụzọ iji gosipụta onwe nke RAE nabatara.
Dịka m gwara gị na mbụ: ekwenyere m, mana a na m arịọ gị biko gụghachi, kpọm kwem enyi Mario sị na ha bụ mpaghara.
Ihe na - eme bụ na e nwere ọtụtụ ndị kwenyere na ha na - asụ “gọọmentị” Spanish / Castilian na, nzuzu, akpa oke megide ndị ọzọ. Neutral Spanish dị ka unicorn, akụkọ ifo, nke na-adịghị adị n'ezie. Keep ga na-ede ihe niile i nwere ike ime ma leghara “ndị ọkachamara” ndị a anya n’asụsụ. All nsụgharị nke Spanish bụ kpam kpam irè, Spanish-Argentine gụnyere, ya mere, agwala gị ma ọ bụghị. Gaa n'ihu na blog. Banyere.
O di nwute, i mehiere. Nke a abụghị "dị ka a ga-asị na ọ na-ekwu okwu" ụzọ e si ede ihe, ọ bụghịkwa ụzọ ederede na-enweghị omenala.
Ezigbo Saeron, (nke mbụ, m ga-eme ka o doo m anya na m si Madrid nke ụdị dị ọcha, ezigbo «pusi»).
Okwu gị ka dịtụ onye na-achị obodo, yana ụtarị na-adịghị mma. Tinye Panispanico Dictionary nke obi abụọ ma dokwuo ha anya.
N'etiti ndị na-ekwu okwu Castilian, ndị Spain bụ obere obere ego na anyị enweghị ikike ịmanye ihe ọ bụla, ọtụtụ ihe anyị tinyere ọbara na Latin America ruo ọtụtụ narị afọ.
PS: M biri afọ 28 na Buenos Aires na anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-amụta site n'akụkụ ndị ahụ.
Ndị okike Cinnamon na-ekwusi ike na desktọọpụ cinnamon abụghị ndụdụ kama ọ bụ gburugburu xD
Na n'ihi gịnị? Ọ bụrụ na ọ bụ ndụdụ ... ma ọ bụ?
Kedu ihe ha dabere na ikwu nke ahụ?
Emechara m tinye ubuntu 14.04 (nke ikpeazụ, ọ bụghị beta) na amaghị m ihe kpatara ya mana ebe ọ bụ na mbipute 10.10 ubuntu abụrụla nke a, nwayọ nwayọ, ebe m na-eji ịdị n'otu, windo kwụ ọtọ na ihe niile, ana m anabata na ụdị a 14.04 bụ ngwa ngwa, mana Amaghị m ma ọ na-ekowe m abụghị ihe dịka na 13.10 na 13.04, n'ezie. Emechara m laghachi na fedora ma nọrọ na XFCE fedora 🙂
Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye ubuntu 14.04 trusty tahr?
usoro ma wụnye Linux Linux: p
Jua! N'agbanyeghị nke a, ụdị Ubuntu a adịghị njọ ma ọlị ... ọ dịtụ mma (ma e jiri ya tụnyere nke gara aga).
Ma ọ bụ elementrị OS, Linux dị ezigbo mma.
Hee hee hee… ._. Ọ bụrụ na m ga-etinye Arch, m ga-ahọrọ ịlaghachi na windo ma nọrọ ndụ xD
Zaghachi Rafael Mardojai
Obi oma: Echere m na ị gụrụ na ụdị Ubuntu ọhụrụ a na-abịa na LibreOffice 4.1.
Naanị icheta na ọ dịkwaghị mkpa "apt-get" iji wụnye na usoro ndị ọzọ, ugbu a pịnye iwu "apt"; ịmaatụ, "sudo apt wepụ Spanish akpaala okwu" (hehe, nke ahụ bụ ihe egwuregwu, ewela iwe).
Ọ bụ Ernesto Flores dijo
Ndewo onye ọ bụla:
Mmelite dị ka egosiri ebe a, mana naanị ihe anaghị m achọ ịmalite bụ na ụdị Audacity (2.0.5) maka distro a na ndị ọzọ, anaghị anabata ngwa mgbakwunye Linux dị ka LADSPA, LV2, DSSI na ndị ọzọ nke a na - etinye n'otu oge mgbe ijikwa plugins site na ndị nchịkwa Software. Ma ọ dịkarịa ala amaghị m otu esi ejikwa ha ọzọ. Ihe ọ bụla nwere ike ịbara anyị uru n'okwu a nwere ekele n'ọdịnihu.
Ezigbo obi: Ernesto Flores
Zaghachi Ernesto Flores
naanị nye na APT emegharịrị, ọ bụkwaghị sudo apt-get install mana sudo dabara adaba.
mbipute ọhụrụ nke APT na Debian na Ubuntu: http://rootsudo.wordpress.com/2014/04/20/nueva-version-de-apt-en-debian-y-ubuntu/
Ị nwetere ya! Kedu ihe bụ omenala.
Emelitere ya. 🙂
Ndewo, daalụ maka onyinye a. Ọ ga-amasị m ịmara otu esi etinye mgbakwunye ma gbanwee ọdịdị ya na Ubuntu. M wụnye 14.4. Abụ m onye noob.
Ntuziaka dị mma mgbe niile Pablo 🙂
Ọ dị m ka ụdị a bụ ezigbo onye na-anọchi anya ya, mana ọ bụ naanị ụdị xfce ya, n'ihi na ịdị n'otu adịghị ada karịa egbe XD. Naanị mmejọ m na-ahụ bụ na awn adịghị na repositories (ebe beta) ihe ọ bụla ị nweghị ike idozi na 10 sekọnd na ọnụ ya = ^. ^ = Ma ebe ahụ, m na-ahapụ okwu ahụ ò.ò
Ana m akwado xfce ọ bụghị naanị maka ịdị nfe na ike ya, kamakwa maka nnukwu nhazi ya. Dị n'otu dịtụbeghị kwenye m / mmasị / ọrụ ya mere m gafere = ^. ^ =
PS Enwere m olileanya na ha nwere ike idozi akaụntụ m n'ihi na ọ gaghị ekwe m omume ịza ajụjụ na ya, enwere m ike ịbanye mana mgbe m na-achọ ibipụta okwu m ọ na-egosi m na anaghị m abanye na TT adị m otu a ka ọ dị izu ole na ole ma na mwute na m ghọtara na ọ nweghị nkọwa e bipụtara nkem kemgbe ahu TT
Ugbu a, enwere m ike ịbanye ịza ajụjụ na akaụntụ m, echere m na njehie ahụ bụ nke m XD ... ma ọ bụ akaụntụ m nwere OO
Ezi! Obi dị m ụtọ na edozila nsogbu ahụ. 🙂
Ọ dị mma ịhụ gị gburugburu ebe a Saito.
Ebe nchekwa Unsettings anaghị arụ ọrụ, maka mbipute 13.10 ... ọ rụghịkwa ọrụ.
Otu ihe a na eme na Cinnamon ... ebe nchekwa edobeghi ọrụ, etinyekwala ha.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere nke ziri ezi, biko… nyefee data ahụ. Daalụ!
Onye ọ bụla nwere nsogbu na ọchụchọ na gbaara? Enweghị m ike ịnweta nsonaazụ ọchụchọ n'ịntanetị, site na weebụsaịtị dị ka Wikipedia ma ọ bụ Deviantart, kama ihe ọ bụla na-arụ ọrụ (vidiyo, ihe oyiyi, mmekọrịta)
Zaghachi ka robin
akwụkwọ ịkpọ òkù dijo
Ọfọn, n'onwe m, Ubuntu a bịara nke ọma karịa ndị na-apụta, ana m ekwu, maka ihe ọ bụ LTS, agbanyeghị, amaghị m ndị ọzọ mana m na ihe niile nke ahụ nyere m nsogbu, ma ugbu a na Linux mint ọ dị ka ọ na-arụ ọrụ ka mma maka m O yighị ka ọ dabere na ubuntu, mana enweghị obi abụọ nke a bụ ezigbo nkuzi, ọkachasị ndị na-aga ịbanye na Linux yana ubuntu LTS a.
Ndewo, ihe niile agaala nke ukwuu, mana enwere otu ihe m na-agaghị enweta na nke ahụ bụ ịwụnye sopcast .. elere m anya na nchekwa ma ọ na-enye m njehie mgbe niile… Abụghị m onye Ubuntu maara ihe, enwere m ekele maka onye ọ bụla onye nwere ike inyere m aka.
Enweela m otu nsogbu ahụ. 🙁
Enweghikwa m ike ịwụnye ya na ụdị ochie nke Ubuntu.
sudo apt wụnye compizconfig-settings-manager compiz-fusion-plugins-extra
Enwetara m E: Enwere ike ịchọta ngwakọta ngwakọta-mgbakwunye-mgbakwunye
ka m na-eme ??
O yiri ka edegharịrị aha ngwugwu ahụ. Nwalee nke a:
sudo apt wụnye compizconfig-settings-manager compizplugins-extra
Aịzik 98 dijo
Ndewo, enwere m obi ụtọ na ozi dị na ntuziaka a na ... ajụjụ nke kedu nsụgharị ka ị kwadoro maka laptọọpụ m na Intel Core i3 na 2.4 GHZ / M na-arịọ ka ị zere ọdịda na ụfọdụ OS X LET US US FREE SOFFWARE LET US US LINUX
Zaghachi Aịzik 98
Chei biko zaa m, olee otu ubuntu a? ị na-akwado m ya? Ike gwụrụ m na Arch na njehie ya, achọrọ m ihe dị mfe, enyemaka!
Oburu na inabata echiche nke ndi anyi no ebe a ma jiri Linux-ubuntu !! Kwere m na ọ kachasị mma ị nwere ike inye akụrụngwa gị yana ahụike ọgụgụ isi kachasị mma ị nwere ike inye onwe gị, ọ bụghị naanị na m nwere nkụda mmụọ (na obi nkoropụ) na windo, ọ na-eme m ara ọ bụla oge ọ bụla m ga-akpụzi igwe m n'ihi na ọ dị nwayọ ma ọ bụ ihe batara, n'agbanyeghị ịkatọ ya na ịlele maka njehie (nke jọgburu onwe ya n'ihi na ime ya kwa ụbọchị iri na ise ọ bụla), m ka nwere nsogbu, hapụ sọfụ ịntanetị, mepee taabụ 15 meghere ma ọ bụ windo 10 nwere ọtụtụ taabụ bụ ọnwụ maka pc m, ọ jọgburu onwe ya, ruo mgbe ọ kpọnwụrụ ma mechie ihe niile !! My Lap bụ ihe na-adịbeghị anya, ọ bụ ihe dị ka ọnwa 5 ọhụrụ, nke m tụrụ anya na ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ karịa, ọ dabara nke ọma na m zutere onye na-etinye ubuntu n'ụzọ m, na LIFE na apata ụkwụ m dịka m maara na ọ gbanwere kpamkpam, na ububtu ọ na-arụ ọrụ nke ọma ikike nke apata ụkwụ gị, ị nwere tebụl dị iche iche ma ị nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche na nke ọ bụla, ị nwere ike ime ka apata ụkwụ gị rụọ ọrụ ma rụọ ọrụ n'ogo ị tụrụ anya, n'onwe m na-enwe mmasị na ya image a otutu, ọ bụ ihe enyi na enyi ịgbanwe ebe nke akụrụngwa na ngwa na ndọtị ọ na-ejikwa yana nke kachasị mma, enwere nnukwu obodo nke anyị nwere ike ịkwado ibe anyị. YES, EE, UBUNTU ka akwadoro kpamkpam, nani ihe ichoro bu ka olulu oru ya nke oma ma nihi nka, otutu blog!
O DERE !!
Zaghachi na May
Defragment it and lelee maka njehie (ọ jọgburu n'ihi na ọ na-eme ya kwa ụbọchị 15 mere ka ọ bụla ụbọchị ……. My Lap bụ na-adịbeghị anya, ọ dị ka ọnwa 2 ọhụrụ …….
hahahahahaha agara m eweghachi ya dị ka nkwa ma ọ bụ ihe ọjọọ ọ bụ na anaghị m edozi windo m asaa pc maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 3 ma ọ na-arụ ọrụ m zuru oke enwere m ihe egwuregwu 200 egwuregwu arụnyere na mmemme ole na ole yabụ echeghị m windo bụ ihe kachasị njọ na-eme bụ na enwere ndị nwere uche nke onye akaebe jehova ga-achọ ịgbanwe onye ọ bụla na akụkọ linux ha .. ọ dịkarịrị mfe inye na-esote ma nabata nyocha ahụ maka njikwa nchekwa iwu wdg wdg wdg. windo ikike nwere ike hacked na ndị ọzọ software na egwuregwu vidio kwa ... anyị ga-enwe free software hehehehehe
Agbasoro m ntuziaka ndị ahụ ruo na nke onye na-anya ọkwọ ụgbọ ala eserese mana m ga-ewepụ ikike onye nwe ụlọ wee weghachite nke nweghachi ozugbo m nwere ohere (ọ ga-efu m).
Nsogbu m nwere mgbe m megharịrị ọrụ nzuzo ahụ bụ na, mgbe m malitere, ọ dị ka à ga-asị na ihuenyo Ubuntu gbanwere n'aka nri ma enwetara m obere ọnya. Ihe a niile ekweghị ka m kwaga ma ọ bụ nye m ohere ịnweta dash ma ọ bụ ihe ọ bụla iji laghachi na nhazi mbụ. Ekwesịrị m ịlụ ọgụ na "ọnọdụ eserese eserese" wee nye m ọtụtụ nsogbu ma ọ bụ obere, ọ bụ mgbe m bidogharịrị ọtụtụ oge na ọ nyere m ohere ịgbanwe ya ọzọ ma ugbu a ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ihe bụ na dịka m ga-achọ iji ihe eserese ahụ mee ihe na Ubuntu, m ga-achọ ịchọta isi ihe ga - eme ka m nwee ike bido ya nke ọma ... ụdị a bụ AMD Radeon HD 7670M, agbalịrị m fglrx na fglrx-mmelite ma otu nsogbu. Ọ nwere ike ọ bụrụ ịdị n'otu? Eleghi anya oburu na m nwalee Ubuntu Studio ma obu Xubuntu o gaghi eme, odoghi m anya.
Ihe nlere anya nke komputa a bu Toshiba Satellite L850 (ee, o biara na UEFI ... ma akuku a ka m ghaziri).
Ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka na nke a, m ga-enwe ekele dị ukwuu.
Ndewo, Cinnamon PPA abụghị 64-bit 🙁
Ndewo ferr! Daalụ maka nkọwa!
M ga-agbakwunye ya na post.
Apụghị m ime ka Popcorn oge ije ma 😛
N'ehihie, m chọrọ ịhụ ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ike inye m aka na okwu a. M na-ekwu banyere ihe mere m ...
Wụnye Ubuntu 14.04 na windo 8 na igwe ọhụrụ sony vaio. Gbanyụọ UEFI site na ịgbanye na Legacy buut. Dika enweghi m ike igbanwe nyocha buut nche, lee ma Ubuntu choputara na nwunye na enwere sistemu ozo. Nke ahụ bụ otú o si gaa. Mgbe ahụ gaa n'ihu na ntinye Ubuntu n'enweghị nsogbu.
Mgbe ịmalitegharịrị igwe ahụ achọpụtara m na na ihuenyo abụọ ebe m nwere ike ịhọrọ sistemụ arụmọrụ m chọrọ, enwere m ike ịmalite Ubuntu.
Kedụ ka m ga - esi dozie nke a ma chọọ ibido windo 8?
Ndewo enyi kedụ iji Linux
Ọtụtụ Grax maka onyinye ahụ zuru oke, enwere m ajụjụ, ma eleghị anya ọ naghị aga isiokwu ahụ mana enwere m olileanya na ị nwere ike inyere m aka. Achọrọ m ịgbanwe agba na Ogwe na ha scrolling (menu mmanya na-ezo) ma ihe m hụrụ bụ na ọ na-eme na usoro> anya…. mana nhọrọ ahụ apụtaghị na m, enweghị ọdịdị na sistem m, amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ ibudata ngwaọrụ na tweak, mana na nsụgharị 12.04 enweghị m nsogbu na ya, ọdịdị ahụ ka dị. Amaghị m ihe kpatara ya mana ọbụlagodi sistemụ> nkọwa ebe ọ ga-ekwu ubuntu 14.04 ọ sị ubuntu 13.10 WTF ??? !! ma na njikwa ọ na-ekwu na mmetụta m etinyela 14.04…. Eleghi anya i nwere ike iduzi m, m ga-ekele gi nke ukwuu !! Ehihie ọma!
Kọmputa m dị otu narị!
Enwere onye ga - enyere m aka ịwe nweta sistemụ arụmọrụ m na pc na - enweghị emetụta ya, etinyegoro m ya
Amalitere m na sistemụ arụmọrụ Linux ma enwere m ahụmịhe dị njọ.
Ka anyi bido: Enwere m PC ato ato, IBM Pentium 3, asus na amd3. Pipermine, Fedora, Ubuntu 64 arụghịrị m ọrụ, ma taa, m gbalịrị KUbuntu, ọ dịghị onye n'ime ha na-arụ ọrụ, na Kama ha mebiri PC m. Na otu m arụnyere Ubuntu na m nwere usoro ya iji nwee ike iwepụ ezi uche na-efu data nke sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ.
Enweghị m ike ịkọwa nsogbu ahụ n'ihi na ọ naghị arụ ọrụ, pc ahụ dị. ewezuga m ịmalitegharị iji mee ka ọ rụọ ọrụ ọzọ.
Enyemaka fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe efu ma ọ bụ ihe ọ bụla, m debara aha na nnọkọ Ubuntu na Spanish ma ruo ugbu a enwetabeghị m nkwenye.
Ha na-ekwu na meghere emeghe anaghị m ahụ nke ọ bụla, na ntụle ọ dị ka emere ya maka ụfọdụ otu, ọ nweghị nhọrọ nke iwepụ, enweghị isi n'ihi asụsụ dị iche iche, maka ndị ụwa niile anyị ghọtara.
M onwe ya gbalịrị ya n'ihi na ọ na - adọrọ uche m n'efu, nke na - abụghị eziokwu ma ọlị.
Marcos, ekwula okwu otú ahụ. Ihe mbụ m ga-ekwu bụ na ọ bụghị mmadụ niile nwere otu ahụmịhe na GNU / Linux, n'ihi ọkwa mmụta ha, ndidi na ngwaike ha na-eji.
Ọ dịghị OS na-agbaji PC, ma ọ bụ ngwaọrụ anyị: Ọ bụ anyị. Nsogbu dị n'etiti oche na keyboard. Ugbu a, ọ dị obere na na kọmputa dị iche iche 3, yana ngwaike dị iche iche, nkesa 4 dị iche iche anaghị arụ ọrụ. You nwere ihe jikọrọ n’ihe gbasara ngwaike na ha niile? N'ihi na ihe ochie AMD arụ ọrụ anaghị arụ ọrụ 100% m ghọtara, mana ndị okenye ga-enwerịrị nkwado.
Ọ bụghị ebe niile ị nwetara enyemaka ma ọ bụ ihe nkịtị, n'ihi na ọ bụghị iwu na ịme ya, agbanyeghị, m na-akpọ gị ka ị gaa na Nzukọ anyị iji hụ ma ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma.
Nkesa niile ị kpọtụrụ aha na-emeghe, ma ọ bụ opekata mpe 95%, mana aghọtaghị m ihe ị tụrụ anya ịchọta ma ọ bụ ihe ị tụrụ anya ime na koodu nnweta. Source nwere ike ịkọwa m? You nwekwara ike ịgwa m ihe OS nwere nhọrọ iwepụ? Kedu ihe ị chere n'asụsụ dị iche iche?
M na-ekwughachi, ọ bụrụ na ha nweere onwe ha, ọ dịkarịa ala karịa Windows na OS X.
Zọ abụọ a dị mma, nke atọ abụghị. Kedu ihe ọ ga-abụ?
Ndewo, mgbe m zutere Ubuntu (na 2010-2011) M wụnyere ya na laptọọpụ Acer 3680 ọ dịkwa nwayọ. (Echere m na ọ bụ n'ihi na m wụnye ya na wubi) ma e wezụga Laptop ogbenye nwere 128mb nke vidiyo na 512mb ebule na Intel Pentium M otu-isi processor, ugbu a enwere m Linux Mint 16 (Mate) arụnyere na Dell latitude D351 Laptop. na 3gb nke ebule (2,8gb kpomkwem), AMD turion processor (sọrọ isi), 256mb ati ndịna kaadị na ọ na-agba ezigbo, ọ bụ ezie na ọ gbachiri adịkarịghị.
Achọrọ m ịma ma ubuntu a ọ ga-aga m ọsọsọ ma ọ bụ na ọ daa. (Agụwo m na anaghị akwado kaadị ATI ma ọ bụ ụdị ihe ahụ).
Ekele na ekele maka azịza.
M na-aza onwe m, m tinye ya na ọ na-agba ọsọ na ezigbo ọsọ (kpọgidere oge ole na ole).
M nnọọ arụnyere ubuntu na a Compaq presario v5000 ihe niile na-aga oké ihe ọjọọ bụ na ọ dịghị ịchọpụta netwọk ikuku na m na-amaghị otú wụnye ndakpu mmiri ozuzo na kaadị bụ a broadcom bmc4311
Aga m agwa gị otu esi eme ya, (Abụ m Galician na enwere m buntu na Galician, yabụ aha m ga-enye gị nwere ike ọ gaghị abụ kpamkpam)
Na-esote oge, ị nwere menu ebe bọtịnụ nkwụsị bụ, ị na-enye ya wee họrọ "Mmasị Sistemụ"
Ozugbo ị banyere, họrọ "ngwanrọ na mmelite" wee mechaa nweta taabụ ikpeazụ "ndị ọkwọ ụgbọ ala" na ebe ahụ ọ na-agwa gị ma ịchọrọ ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka Broadcom.
Zaghachi na Cibrán
Na Asus X50R enwere m otu nsogbu (Broadcom bcm4311 kaadị). Ndị ọrụ ụgbọ ala STA nke sistemụ ahụ nyere m anaghị arụ ọrụ ya mere ihe ya abụghị KA Wụnye ha ma ọ bụ iwepu ha:
$ sudo apt-nweta purge bcmwl-kernel-source broadcom-sta-common broadcom-sta-source
Wee wụnye nchịkọta:
$ sudo apt-nweta wụnye b43-fwcutter firmware-b43-installer
Mgbe ịmalitegharị, wifi na-arụ ọrụ.
Ebe nchekwa a anaghị arụ ọrụ:
sudo tinye-apt-repository ppa: gwendal-lebihan-dev / cinnamon-stable
Daalụ maka ntinye gị
iji wụnye Cinnamon anaghị arụ ọrụ, ndị a jere m
sudo tinye-apt-repository ppa: gwendal-lebihan-dev / cinnamon-abali
Ndewo, ị nwere iwu niile na-ezighi ezi, ọ bụghị nke ọma kama ọ bụ ịnweta-inweta.
Ọfọn, ma "apt" na "apt-get" rụọrọ m ọrụ. N'ime ụdị Ubuntu kachasị ọhụrụ a ị nwere ike iji ...
Ndewo. Enwere m mmasị na post gị.
Ejighị m Linux maka afọ 7 ma taa m laghachiri Ubuntu 14.04. Ihe agbanweela nke ukwuu.
Mgbe m na-agụ ihe, ahụrụ m na naanị ị dere "apt install" ọ bụghị "apt-get install" ka m chetara. Mgbe ahụ, m gbalịrị ya ma ọ rụ ọrụ n'ezie. Olee mgbe mgbanwe ahụ gbanwere? Ọ dị iche iche site na inweta-inweta ma ọ bụ nka?
Ndewo nwale m ubuntu 14.4. Ọ dị oke mma
Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dijo
Ana m ekele gị nke ukwuu maka nduzi enweghị ọdịmma onwe gị.
Daalụ nke ukwuu, ọ dịghị ihe dịka post dị mma na nke bara uru!
Iji melite ma ọ bụ Nwelite na sistemụ arụmọrụ Ubuntu 14.04 Trusty Tahr ị chọrọ iwu ndị a sudo apt-nweta mmelite na sudo apt-nweta nweta nkwalite.
Zaghachi to alvaro garcia isordia
Ndewo, olee otu m ga-esi gbanwee mgbatị .zip na .otx na ubuntu?
Emechara m kwụsị iji windo wee gbanye ubuntu, nsogbu bụ na enweghị m ike ịwụnye akwụkwọ ọkọwa okwu Spanish na autocorrector na libreoffice, ebe ọ bụ na ọ na-ebudata ihe na-agbakwunye na zip.
Zaghachi ka richard
Ezigbo ndu, daalụ. Enwere m ohere a ịgwa gị na a ga - achọta mmemme Unsettings na-akụ Ubuntu na Unity na adreesị a:
Onye dere ya kọwara na e mere ya maka ụdị Ubuntu gara aga na ọkwa ya bụ Beta. Na ntinye ọ bụla nọ n'ihe ize ndụ nke onye ọrụ ọ bụla na-etinye ya.
Ejiri m gdebi wụnye ya ma dozie ndị niile metụtara ya ka m wee wụnye ya ma gbaa ya ọsọ ma mee ya n'enweghị nsogbu. Emebeghị m mgbanwe ọ bụla, yabụ enweghị m ike inye gị ozi gbasara ụdị nsonaazụ ndị a-
Enwere m nsogbu Xubuntu 14.04: compiz anaghị arụ ọrụ.
M na-etinye ma hazie ihe niile dịka m na-eme mgbe niile, na mgbe ịmalitegharị X ma ọ bụ usoro ahụ, compiz anaghị arụ ọrụ ma mgbe ụfọdụ ana m enweta ozi na Compiz mechiri na-atụghị anya ya ma nye m nhọrọ ịmalite ma ọ bụ mechie.
Enweelarị m googled kemgbe Xubuntu pụtara ma achọtabeghị ihe ọ bụla bara uru, ihe niile m chọtara bụ ntuziaka maka ịwụnye mkpokọta na nsụgharị ochie, mana ọ nweghị ihe metụtara okwu metụtara kọmputa m.
Ana m etinye ebe a ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ụdị nsogbu ahụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ezie na nchịkọta ahụ dị m mkpa, mana na ọ bụ naanị ụzọ bara uru m nwere maka ịdọba ihe nyocha m n'anya.
Enweghị ihe ọzọ ị ga-ekwu, enwere m ekele maka nlebara anya gị.
Ezigbo ọkwa!, You maara weebụsaịtị ọ bụla na-ekwu ihe kwekọrọ na ATI / AMD eserese ma ọ bụ nke na-arụ ọrụ nke ọma na Linux? (Na ha nwere nkwado ma rụọ ọrụ dị mma)
Naanị nnukwu, daalụ nke ukwuu
Bɛma wo, w’abusua!
ihe na-eme bụ na achọrọ m ịwụnye ubuntud na laptọọpụ m o nwere 2 GB nke ebule 1 ghz mana o nwere isi abụọ ọ ga-arụ ọrụ maka m
Zuru oke, ọ dị mma!
Zaghachi ka ị ghara ịlụ ọgụ
Zaghachi na alberto Acevedo
Ndewo onye ọ bụla, agụrụ m ọtụtụ okwu, eziokwu bụ na abụghị m onye isi na ọchịchịrị ndị a nke Ubuntu, mana ọ dọtara uche m na ị nwere ike ịhọrọ n'etiti Gnome Flashback na Unity site na nbanye, mana Naanị nke ahụ ejughị m afọ, ya mere m wụnye Gnome 3, ebe ọ bụ na usoro ndị a kpọtụrụ aha, ugbu a, nsogbu bụ na Ubuntu Tweak anaghịzi arụ ọrụ na interface m mgbe ụfọdụ anaghị egosi ihe niile dịka checkBox na mgbe ị na-achọ imelite site na Mmelite njikwa Achọpụtara m na enwere ngwugwu na-ezighi ezi ma ọ bụ ppa ochie na m nwere ike ime mmelite na-eleghị anya ma ọ bụrụ na m nye ya ka ọ gaa n'ihu ọ na-ajụ m ka m wụnye ọtụtụ mmemme m nwere na Ubuntu ọzọ, gịnị kpatara ya? Enwere m ike inwe Unitydị n’otu na Gnome3? M ga-ahọrọ n'etiti otu n'ime ndị 2 ahụ? …. I meela nke ukwuu maka onyinye a, enwere m olileanya na ị ga-enyere m aka
Zaghachi Desiderio Goyen
Ndewo, ndu a maka Ubuntu Gnome? ndo ma abughi m ọkachamara linux. Daalụ.
Ruo oge ụfọdụ enweela m oke ngafe nke ịre ahịa n'ịntanetị na n'asọmpi asọmpi, ana m eru oke nke enweghị ike imeghe windo na-enweghị ihe pụtara.
Ihe niile bu n'ihi na ime uzo joomla, m mepere ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ihe yiri ya ma ugbu a amaghị m otu esi edozi ya. Enweghị m ike ijikwa ndị Trojans ọzọ ma dịka ị ga-ahụ na anaghị m amụta nke ukwuu n'okwu a.
Nwere ike ịgwa m ebe m ga-aga dozie ya?
Daalụ nke ukwuu maka itinye uche gị na oge gị!
Nke a ọ na-eme gị na Linux ma ọ bụ Windows?
Ọ dị ezigbo mma, ntuziaka na-enyere m aka iri ọtụtụ ihe na Ubuntu. Achọrọ m ịga na nke 14.04 mbipute
Ndewo, achọrọ m enyemaka ozugbo enwere ike, nsogbu bụ na iwu anaghị arụ ọrụ maka m, ana m enweta /// E: Enweghị ike igbochi ndekọ nchịkwa (/ var / lib / dpkg /), enwere ike enwere usoro ozo eji ya?
Enweghi m ike iji ụlọ ọrụ sọftụ ubuntu
Pd: My exp na ubunto bụ = 0
Nke ahụ ziri ezi ... ị nwere ike na-agba ọsọ mmelite ma ọ bụ ntinye nke ngwugwu ma ị ga-agba ọsọ ahụ maka ụfọdụ ihe kpatara ya. Maka nke a, dpkg bu "dizzy." Ihe ị ga - eme bụ ihichapụ faịlụ / var / lib / dpkg / mkpọchi na iwu ndị a:
sudo rm -f / var / lib / dpkg / mkpọchi
Ụtụtụ ọma. Mgbe ị wụnye mmelite Ubuntu anaghị emeghe m, ọ dị ka nwa na ihuenyo, nke m na-eme.
Zaghachi Hugo Ramón Arzamendia Rodriguez
Onyinye magburu onwe ya nye ndị anyị na-amalite ịnyagharị ụwa a
Ndewo, ahụrụ m na na post a ị na-akuzi otu esi tinye mgbakwunye ndị ọzọ, mana ahụghị m na ọ na-adọ aka na ntị banyere ihe egwu na nchekwa na nkwụsi ike maka sistemụ arụmọrụ a.
Abụghị m ọkachamara IT, mana a gwara m ka m ghara ịwụnye ppa, ebe ọ bụ na ihe niile na-anọghị na etiti sọftụwia Ubuntu nwere ike ịkpata nsogbu.
Achọrọ m ịma echiche gị, daalụ
Na akwukwo ihe egwu di. Mana ọ bụrụ na ndị na-elekọta PPA bụ ndị mmepe tụkwasịrị obi, nsogbu agaghị adị. Otu echiche ahụ, nkwanye m bụ iji PPA eme ihe. Ọ bụghị maka izere iji ya mana ọ bụ maka iji ihe eji eme ihe na ọgụgụ isi.
N'aka nke ọzọ, amaghị m onye ọ bụla nje nje ma ọ bụ malware na-eji PPA.
Daalụ nke ukwuu maka ama ọ bara ezigbo uru
Adị m ọhụrụ nye Ubuntu na m na-anwa kazam mana enwere m nsogbu igwu vidiyo ndị a na sistemụ ndị ọzọ dịka android ma ọ bụ windo, gịnị kpatara nke a ma ọ bụrụ na edere m ha na mp4? Daalụ maka enyemaka gị
Zaghachi Alonso AR
Ọ ga-amasị m ịma otu ị ga - esi gbanwee agwa gị mgbe ịpịrị ihu na mpio abụọ. Nke ahụ bụ, na nhazi ndabara, ịpị abụọ na windo na-abawanye ya. Ihe m choro ime bu iwelata ya site na ịpị ugboro abụọ. Na ụdị ndị ọzọ nke Ubuntu emeela m ya mana ugbu a echetaghị m etu esi eme ya ma enweghị m ike ịchọta ya ebe ọ bụla.
Ana m ekele gị nke ukwuu maka iwepụta oge iji kọwaa ihe a niile, ogologo oge m chọrọ ịwụnye Ubuntu na igwe m mana ọ na-esiri m ike ma nye m enyemaka mega, daalụ!
Zaghachi José Pablo Ramos
Ndewo ndị enyi, mara nke ọma na m kpebiri inyocha ụwa nke Linux, maka ebumnuche nkasi obi anaghị m eji Ubuntu, mana achọpụtara m banyere Elementary ma rue ugbu a ọ dị mma, mana ọ dị m ka ọ dị nwayọ, ka anyị kwuo arọ maka PC m, m na-eji Elementary 64BITS, 4GB RAM, Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz × 2; V896 Teknụzụ, Inc. CN896 / VN4 / P900M9 [Chrome 01 HC] (rev 120) na 64GB nke diski ike, ihe iji mee ka ọ dị ntakịrị m ga-asị: / na ajụjụ ọzọ dị mma iji 32 BITS ma ọ bụ m gafere na XNUMXBITS? Enwere m olileanya na anaghị m ekwu okwu na ebe na-ekwesịghị ekwesị mana enwere ndị na-ede blọgụ Elementary ole na ole na m ghọtara na Elementary dabere na Ubuntu, yabụ, ọ bụ otu ihe ahụ, echere m.
Adị m ọhụrụ na ụwa nke Linux, ọ ga-amasị m ịjụ ajụjụ.
M ji Linux Mint na m masịrị ya interface na na! Ma mgbe m rụnyere Ubuntu n'ihi na dịka m nụrụ na nkesa ahụ ka mma (enweghị m ike ikpebi na m bụ onye ọhụụ), ana m etinye ya ma ọ pụta na ihe niile dị mma mana Gnome nke Ubuntu na-eweta na anaghị m enweta tinyere.
Ajụjụ bụ: Ọ bụrụ na m wụnye Cinnamon nke bụ interface Linux Mint nwere, desktọọpụ na Native LM menu nwere akara ngosi?
Nwanyi Cod (biko abughi m spam) dijo
Ọ bụghị SPAM ¬¬: Ndewo. Biko gbaghara maka mbipụta a, ma gbaghara ndị ọ na-ewute na okwu a: Nke bụ eziokwu bụ na enwere m nsogbu imelite, ebe ọ na-agwa m na edegharịghị aha mbinye aka na peeji m ga-ewepụ na-ekwu na ọ naghị nwee igodo di. Njehie m dị na GPG na peeji nke mgbasa ozi ọtụtụ
Filesfọdụ faịlụ ndeksi dara na nbudata. Elegharawo ha anya, ma ọ bụ jiri nke ochie eme ihe.
Amaara m na m ga-agbanwe ma mezie nke a na ndepụta ahụ, mana amaghị m otu esi eme ya. Agbasoro m ntuziaka na ọtụtụ peeji, mana eziokwu bụ na anaghị m aghọta nke ọma, na enweela m ahụmịhe ọjọọ na m ga-etinyeghachi. Eeh. Ama m na nke ahụ bụ ihe ị mụtara; Mana nsogbu ọzọ dị: kọmpụta ahụ bụ nke onye nọ n’afọ iri na ụma nke na-amaghị ihe ọ bụla gbasara Ubuntu, ndị mụrụ ya so na ndị kwenyere na ọ bụrụ na kọmputa na-akwụsịtụ na ọ bụ makana ihe dị oke njọ mere ya. Nyere m aka. Abụghị m ọkachamara, mana m na-eji kọmputa a. Ana m arịọkwa mgbaghara ọzọ maka ihe kpatara nsogbu a na-akpata.
Zaghachi Nwanyị Bacalao (biko, anaghị m spam)
ọ bụ ya mere windo kacha mma
Linux nwere ike na-arụ ọrụ dị ukwuu na sava ma n'ihi na a nkịtị ọrụ ọ bụ nnọọ mgbagwoju anya na otu akụkọ na-ama na-agwụ ike na ị na-adịghị mkpa antivirus ha na-eche na ha nwere ihe niile edozi
Chọghị nkwụnye ụgwọ nke mult-multimedia, n'ihi na ihe niile etinyelarị na ụlọ ọrụ gọọmentị, belụsọ maka okwu a kapịrị ọnụ (ngwaọrụ ndị ọkachamara anaghị etinye na distro gị) ị gaghị achọ ebe nchekwa ahụ.
Nakwa na gọọmentị deb-multimedia peeji nke ha kọwara nke ọma otu esi emeso ikpe gị, ịwụnye ngwugwu kwekọrọ na igodo nchekwa.
Fred ama ama dijo
onyinye dị mma… Naanị m wụnye ubuntu 14.04 lts ọ na-arụkwa nnukwu na Dell pc naanị 2g Ram
Zaghachi Fred Cespedes
Ezigbo onyinye. Daalụ nke ukwuu.
Zaghachi Manuel Ch.
Ndewo, achọtara m ozi ahụ iji rụchaa Ubuntu na-akụzi ihe, ekele maka ozi ahụ. 🙂
Zaghachi ka optimusp
Enwere m ekele maka onye na-eme ihe edemede a, maka na nkọwa ya dị m ezigbo mma.
Ekelere m gị n’edemede gị, nihi na agbanyeghị na mba gị ghọtara, enweela m ike ịghọta ahịrịokwu gị nke ọma, na nke ọzọ, enweela m ike itinye ha n’omume zuru oke na nke ọma. Ọ dị m ka ọ bụ ihe dị mkpa n'ezie bụ ịmara otu esi eme ka ị ghọta ya na nke a ọ dịla.
Ekene m onye obula.
Emechara m tinye Xubuntu 14.04, kedu ka m ga - esi melite FFox? Agaghị emelitere ya site na mmemme ahụ n'onwe ya dị ka ụdị windo (emelitere site na menu Enyemaka)?
Enweela m anya na "ubuntu software center" (dị ka post na-egosi) mana ọ na - agwa m na awụnyere ya (ụdị nke ahụ bụ, wdg) na enweghị m ike ịhụ iji melite ya site n'ebe ahụ, kedu ka m ga - esi mee?
Ezigbo ozi, ekele gị nke ukwuu!
Matt SEIF dijo
MATE bụ ọgbaghara. M arụnyere ya, m gbanwere mmasị, m anya n'ihi na otú iwepụ ya, m uninstall ya na…. Mgbe m chọrọ ịba, Amaghị m paswọọdụ. Agbalịrị m ọtụtụ ụzọ ịbanye ma enweghị ụzọ isi nwetaghachi desktọọpụ m. Ekwesịrị m ịwụnye Ubuntu 14.04 na mmemme niile m chọrọ.
Zaghachi MATTE SEWED
Adị m ọhụrụ na isiokwu a nke GNU / Linux na nkwekọrịta.
Ajuju m ajuju bu maka ndi mmadu enweghi intaneti IHE anyi puru ime, ebe anyi nwere ike ibudata ngwa X ma obu nke anyi choro.
ọmarịcha ma dị irè akwụkwọ ntuziaka bara uru maka ndị ọhụrụ na Linux ezigbo mma blog maka nke a bụ na a na-eji ha enye aka, ekele enyi na-ekele gị nke ukwuu site na venezuela, caracas
Edem ọma, ozi ahụ nyeere m aka nke ukwuu, daalụ nke ukwuu 🙂
Compa wụnye ubuntu 16.04.1 32 bit, mana enweghị m ike igwu vidiyo na ihe nchọgharị ahụ, lelee vidiyo na mpụga ma ọ bụ nchekwa dị n'ime, enweghị m ọtụtụ ihe ọmụma na sistemụ Ubuntu a, ị nwere ike ịgwa m otu m si eme vidiyo na-egwu na ịntanetị wdg.
Wụnye Openbox na Arch Linux
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ mgbe Google Reader nwụsịrị, Kedu ndị na-agụ RSS n'ịntanetị ka anyị hapụrụ?